Ngo-2014, kwakunabamemezeli amahemuhemu eziningi Apple American brand uzoma ukubambisana Russia. Abaningi kwabezindaba baye bazwakalisa ezinguqulweni zabo, esekelwe isimo engazinzile ezomnotho nezombusazwe kuleli zwe. Nokho, i-iPhone ukuvinjelwa eRussia ayikafiki namanje.
Uvela "izinyawo" zikhule
UHulumeni ngo-2014 phambili umthetho okusalungiswa owawuthi zonke idatha yomuntu siqu abantu baseRussia kufanele agcinwe kuphela endaweni WaseRussia. Futhi njengoba sazi, sha Apple kuyinto American. Ngakho, yonke idatha iOS abasebenzisa uhlelo zigcinwa e-USA. Uhulumeni waseRussia, engavumelani kakhulu, njengoba lokhu uyingozi ezithile ukulondeka lezi idatha efanayo. Ngokwesibonelo, abanye amalungu ePhalamende bakholelwa ukuthi US hlola inethiwekhi angasebenzisa akhawunti ngezinjongo zayo. Ngakho-ke, kulolu hlangothi, i-iPhone e ukuvinjelwa Russian kunengqondo.
Kunalokho zingayisongela abantu
Ukuze abasebenzisi ababhalisiwe Yiqiniso, lena ethile ebalulekile. Okokuqala, ngenxa yokuthi uma iPhone ukuvinjelwa komsebenzi ngo-Russia isazoqhubeka owethulwa, kuyodingeka ukushintsha igajethi. Futhi alinganayo ngokuya lula kanye nokusebenza kuze kube manje. Okwesibili, uhulumeni uhlongoza uhlelo yenhlawulo umsebenzisi. Labo cha aphumelele ngegajethi ezifanele kusistimu yesitoreji, uzokhokha premium ngenxa yokwephula umthetho. Kuphakanyiswa oshtrafovyvat kubo kuze kube ama-ruble ayizigidi 50-100.
Kuyini usongo yezokuphepha
Kwaze kwaba yilapho kusungulwa unswinyo ngokumelene Russian Federation, ngeshwa, uhulumeni akakunikanga umcabango okuningi ngokuthi singalithola kanjani ukugcina ngokuphepha idatha yomsebenzisi ababengaphandle kwalelo zwe. Iningi izikhulu ngokwabo ngenkuthalo ukusebenzisa iPhone amafoni. Futhi kunzima kangaka elula babo bayenqaba. Nokho, usongo nokuvikeleka isasekhona. Ngakho, ngokwesibonelo, uhulumeni wase-United States angasizakala idatha. Kanjani ncamashi? Ngokwesibonelo, i-kokulungiselela Idokodo elikhishwe siqu. Yiqiniso, isakhamuzi abavamile, isibonelo, Ivanovu Ivanu Ivanovichu, fihla into ikakhulukazi akukho lutho angeke wathi ngabantu owaziwa nezidumile. Yebo, abanalutho okufanele ukhathazeke ngakho. Ngakho ngemva zonke iPhone kufanele bavinjelwe eRussia?
Manje-ke kwenzeka ukuthi Apple unxusa abasebenzisi ngemvume ilayisensi umsebenzisi uyavuma, owawuthi kungaba ukulandelela kumadivayisi abo, noma ngabe bakuphi. Kulokhu, umthwalo ngomsebenzi wabo azinakugcinwa. Ungenza isimangalo kuphela uma engaphelele wabanjwa ngamazwi 'nensimbi' esikhundleni software igajethi. It kuvela ukuthi inkampani lisho ngokucacile ukuthi idatha yomuntu siqu it amathrekhi nezitolo ekhaya, awukwazi ukuzisabalalisa ngaphandle kwesizathu esizwakalayo, ukusebenzisa ngezinjongo ezingekho emthethweni, kodwa-ke, futhi, futhi abasebenzisi obhekene zokusebenza ohlelweni ngeke. Ngakho-ke, zonke abanikazi iPad, iPhone, i-iPod bangaphansi ezinye ikhava. Yayikwazi ukulandela, kungenzeka idatha yabo esetshenziswa uma umthetho ofanele izokhetheka ezweni elinesidingo kwaziswa igcinwa.
Ngenxa United States kanye Russian Federation zisekhona emazweni ahlukahlukene kakhulu, isakhiwo sangaphakathi futhi uhlukile kubo. Futhi umthetho kanye. It kuvela ukuthi uma i-United States kuyoba ezinye uwuhlobo lomthetho, okuvumela abasebenzisi ukudalula idatha ke Apple uzophoqeleka ukuba simlalele. Futhi akukho namaqhinga Russian Federation ngeke kusize. Yingakho uhulumeni uzimisele ngakho ukulawula ukwabiwa nokusetshenziswa iPad, iPhone, i-iPod kuleli zwe ezingeni zomthetho.
Uhulumeni waseRussia uzama acabangele izifiso izakhamuzi, ukuze lo mthetho ingqikithi iPhone eRussia ngeke kwenzeke. Zonke izenzo sebhili zihloselwe "ukudonsa" inkampani encane. Ngakho, i-Apple kwahlongozwa elula kodwa ngesikhathi esifanayo nesinqumo esinzima lesi sitautsii. Okungukuthi: ukuhambisa amaseva e-United States ngo-Russia, ukuze idatha egcinwe endaweni wezwe lakithi.
Inkinga eyayibalulekile ukuthi inkampani nje akazange abe nesikhathi esanele ukuqedela izimo ezihlongozwayo. Umthetho ngokugcina idatha yomsebenzisi sacala kusebenta ku 1 Januwari 2015. Kwaphela izinyanga eziyisithupha, Apple babengaxoxi nhlobo ukuthi kungenzeka uthuthe amaseva sabo eRussia. Nokho, yokuthengisa iPhone singayekanga eRussia kulo nyaka. Futhi ngisho hhayi kakhulu kwancipha, ingasaphathwa inkonzo. Futhi iPhone 6 eRussia namuhla igajethi athandwayo kakhulu mhlawumbe. Othile othenga ke ngesikweletu, umuntu nje othenga oda othile kusuka phesheya futhi ngempumelelo ulisebenzisa okwamanje.
Okwamanje, i-iPhone amafoni usebenze ensimini ka WaseRussia ngaphandle kwemingcele kubasebenzisi. ICloud service ifu, lisasebenza, izicelo ezifakiwe, AppStore siyasebenza. Kuyaphawuleka ukuthi Russian uNdunankulu kuyinto abasebenzayo iPhone eRussia, ngaphandle Zishiya ke bekhetha omunye igajethi.
Empeleni, ochwepheshe babikezela, Apple nkampani ngeke ngisuke emakethe yethu. Okokuqala, ngisho noma Russia ayilona izwe kuqala for yokuthengisa, namanje limelela value for yokuthengisa. I-iPhone entsha isiyatholakala ngendlela efanayo njengasekuqaleni, ngaphandle kwemingcele. Okwesibili, ivimbela zobuchwepheshe zabo endaweni Russia, inkampani ngeke. Lena disadvantageous zombili. Ngaphezu kwalokho, kungaba kakhulu ukwandisa isibalo kumangala ngokumelene sha, uma kwenzeka i-ukuvaleka. Okwesithathu, umthetho ukulondolozwa idatha yomuntu siqu kuphela yokutholwa Ukufundwa yesibili, kuyothiwa athuthukiswe. Kungenjalo abasebenzisi Russian ungalahlekelwa hhayi kuphela "apula" amadivayisi, kodwa futhi nabanye abaningi.
Akufanele yini ngenze ukuba sikhathazeke?
Okwamanje, asikho isizathu sokukhathazeka. AppStore Russian ezisebenza ngempumelelo, nakuba abanye ephakanyiswe inani layo likwenza ubone ku izimpahla ahlinzekwa, ngoba izinga lokushintshisana aluqinile kakhulu. iPhone 6 eRussia, kanye nezinye onobuhle asethengisiwe kuze kube manje ngaphandle iziqu ezikhethekile. Thenga "Apple" gazhdet, ngabe kungcono "iPhone", "iPads", "i-iPod" kungaba ku-intanethi noma okungaxhunyiwe ku-intanethi, kanye ngaphambili. Wonke amasevisi beqhubeka besebenzela idatha yomuntu siqu ngenkathi bese uya indlunkulu yenkampani eCalifornia.
Kuyaphawuleka ukuthi i-iPhone yokuthengisa eRussia sesinciphe kakhulu, kodwa hhayi ezihlobene umthetho causality. Okokuqala, abanye abasebenzisi ongqingili wenqaba ngamabomu igajethi Apple emva isitatimende Tima Kuka mayelana yakhe kobungqingili. Okwesibili, kakhulu anda intengo yemikhiqizo. Futhi lokhu akuyona ngenxa unswinyo, kodwa kuphela Yiqiniso "ruble-dollar." Ngokwesibonelo, e-United States, intengo kudivayisi lamahubo lilingana, kodwa ukuhunyushwa lwemali Russian rose. Ngakho-ke, abantu abaningi babe sebephinda hhayi ukuthenga igajethi entsha nemfashini. Okwesithathu, izimbangi akuzona elele. I-Russian emakethe ligcwele nakwamanye amadivayisi abakhiqizi kabani zamanani kuhlukile Apple. Ngakho, ngokwesibonelo, izinkampani ezintsha ukubeka amanani aphansi kakhulu zobuchwepheshe zakho, okuyizinto ukusebenza izici ekhangayo kubathengi. Uma "apula" lenkampani lihlangane abasebenzisi Russian, okwenza owaziwayo kanye nezimo price tag, yokuthengisa ngabe nakanjani usuwenyukile, kanye izimbangi kwakuyodingeka benze imizamo enkulu nakakhulu emsebenzini wokukhiqiza amadivayisi amasha.
Umakhalekhukhwini Philips Xenium V387: ukubuyekezwa abanikazi
Smartphone Kuhle nge battery omuhle. smartphone okuthembekile
I enhle isilinganiso - eCrimea, Nikolaevka, ukubuyekezwa
Uyazi kanjani isibonakaliso se-Zodiac ngo-Ephreli?
Njengoba babehlala abalimi neNkathi ePhakathi? Umlando we abalimi
Isitifiketi zokuziphatha okuhle - indlela ukuhlobisa futhi kuphi?
Ukuxuba i-panacotta emlonyeni wami: iresiphi evela ku-Julia Vysotskaya